Nei vanhu ava vachiratidza kufara zvikuru? Vari pane rimwe remagungano edu. Sezvaingoitwa nevashumiri vaMwari vekare vairayirwa kuti vaungane katatu pagore, tinotarisira kuzonakidzwa nokuungana pamwe chete mumapoka akakura. (Dheuteronomio 16:16) Gore negore, tine zviitiko zvitatu: magungano edunhu maviri ezuva rimwe chete uye gungano remunharaunda remazuva matatu. Tinobatsirwa sei nemagungano aya?
Anosimbisa ukama hwedu hwechiKristu. Sekungofara kwaiita vaIsraeri pavairumbidza Jehovha “pakati pemapoka evanhu vakaungana,” isuwo tinonakidzwa nokumunamata takaungana pazviitiko zvinokosha. (Pisarema 26:12; 111:1) Magungano aya anopa mukana wokuungana uye wokushamwaridzana neZvapupu zvekune dzimwe ungano kunyange zvinobva kune dzimwe nyika. Masikati tinodya pamwe chete panzvimbo inoitirwa gungano, zvichiwedzera kunakidza kwenguva idzi dzokunamata. (Mabasa 2:42) Pamagungano aya tinozvionera rudo runobatanidza “sangano [redu] rose rehama” munyika yose.—1 Petro 2:17.
Anotibatsira kufambira mberi pakunamata. VaIsraeri vakabatsirwawo ‘nokunzwisisa mashoko’ eMagwaro avaitsanangurirwa. (Nehemiya 8:8, 12) Isuwo tinokoshesa mirayiridzo yemuBhaibheri yatinowana pamagungano edu. Purogiramu imwe neimwe ine musoro unobva muMagwaro. Tinodzidza kuita zvinodiwa naMwari muupenyu hwedu kuburikidza nehurukuro dzinonakidza, hurukuro dzokusiyirana uye kuenzanisira. Tinokurudzirwa patinonzwa zvakaitika kune vaya vari kukwanisa kutsungirira muedzo wokurarama sevaKristu munguva dzino dzakaoma. Mitambo inoitwa pamagungano emunharaunda inoita kuti tione nyaya dzomuBhaibheri sezvinhu chaizvo uye inotidzidzisa zvinhu zvinobatsira. Pagungano rimwe nerimwe, vaya vanoda kuratidza kuzvitsaurira kwavo kuna Mwari vanobhabhatidzwa.
Nei magungano ari nguva dzinofadza?
Ungabatsirwa sei nokupinda gungano?
Kana uchida kuziva ukama hwedu zviri nani, tapota pinda gungano redu rinotevera. Munhu anokudzidzisa Bhaibheri anogona kukuratidza purogiramu yegungano ratakapedzisira kuita kuti uone zvakaita nyaya dzinokurukurwa. Maka pakarenda yako kuti gungano rinotevera richaitwa riini uye kupi, woripinda kana uchikwanisa.
Ona kuti nei mamiriyoni pasi rose achipinda gungano iri rinokosha.